DOWNLOAD ဘိုးအင်း 717-200 FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 172 ကို MB
downloads ရယူရန္ 88 445
Author: Alejandro Rojas Lucena, ဒါဝိဒ်သည် Robles
အဆိုပါဘိုးအင်း 717 ဘိုးအင်းကတည်ဆောက်စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အကွာအဝေး၏အသေးငယ်ဆုံးလေယာဉ်ပျံခဲ့သည်။ နာမတျောအ MD-1995 အောက်မှာ 95 အတွက်ဖြန့်ချိ McDonnell Douglas 1997 အတွက်ဘိုးရင်းအားဖြင့်ဝယ်ခဲ့အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ဆုံးဆိုငျရာအစအနရှိရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ 717 သတ်မှတ်ရေးမူလက C-707 ခြင်း, 135 ၏စစ်ရေးဗားရှင်းစှပျစှဲခံရဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့်အသုံးပြုထို့ကြောင့် MD-95 ထံသို့ ပြန်. မလာခဲ့သည်။
ဒီ 100-ထိုင်ခုံစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်သည်၎င်း၏ပစ်မှတ်ရောက်ရှိနိုင်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်နှင့်ဖမျးဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလူသိရှင်ကြားလန် Mulally ဟာ, ဘိုးအင်းရဲ့စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌများကနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဇန်နဝါရီလ 2005 ကြေညာခဲ့သည်: "ဒီလေယာဉ်ပျံများအတွက်စျေးကွက် 717 ထုတ်လုပ်ရန်ဆက်လက်မပါဘူး ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအမိန့်ထက် ကျော်လွန်. ။ "။ သို့သော်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်နှောင်းပိုင်း 2001 ကတည်းကကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသန်းရာပေါင်းများစွာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဘေးဖယ် ထား. ကြပြီ။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
ဒီအဖြေပြည့်စုံတင်ဆက်မှု add-on အောက်ကဗီဒီယိုမှာရရှိနိုင်ပါသည်: